Obba Faqaade Shawaaqannaa Du’an Boqotan
Obba Faqaade Shawaaqannaa
Dur Yunivarsitii Finfinnee keessa barsiisaa kan turan kabajamuu mirga dhala namaaf falmaa fi xinxalaa waa’ee siyaasaa akkasumas hawaasummaa kan ta’an Obbo Faqaade shawaa Qannaa umrii isaanii 61tti Wiixata Caamsaa 9 bara 2017 du’an boqotan.
Kutaa Meerilaand magaalaa siilvar Spriing keessatti wal’ansa fayyaa argataa kan turan obbo Faqaadeen waggootii darban digdamii afuriif sochii mormii lammiwwan Itiyoophyaa waashingtan Dii sii fi naannoo ishee jiraatan gaggeessan keessatti bal’inaan kan beekaman turan.
Obbo Faqaadeen qeeqa siyaasaa fi hawaasaa barreeffaman akkasumas sabaa himaa irratti sagaleen dhiyeessuun beekamu.Dabre sinaa keessatti kan dhalatan Obbo Faqaadeen Digrii duraa yunivarsitii Finfinnee irraa barnoota Joograafiin kan argatan yoo ta’u kopen hegen keessatti immoo Digrii lammaffaa barnoota Medikaal Jograafii jedhamuun argatanii jiran.
Bara 1983 hanga 1993 yunivarsitii Finfinnee keessa barsiisaa kan turan obbo Faqaadeen bara 1994 barsiisoota beekamoo yunivarsii Finfinnee keessaa ari’aman turan 42 keessaa tokko.
Obbo Faqaadeen haadha warraa fi ijoollee 3 akkasumas ijoollee ijoollee isaanii 2 qabu.Sirni awwalchii isaanii sambata dhufu gaggeeffama.
Angawoota Amerikaa Wajjiin Dubbachuu Qabna: Keniyaa
Tirampi daarektera FBI irraa 'abdii dhabeef' hujii irra gusse, namii hagii tokko amoo Tirampi waan itti deemaa dhoffachuf tana tolche jedha